खोकनामा किसान र प्रहरीबीच झडपः प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार, किसान धान रोपेर छोड्ने अडानमा – Online Sunapati
बुधबारलाई किन शुभबार मानिन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
१२ बजे राती चि,हान खनेर मान्छे निकाल्ने धामी फेरी जानुपर्यो चि,हान, आ,त्माले धामीलाई नै यस्तो गर्यो (भिडियो सहित)
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन्, माताको दर्शनगरी माघ ७ गते बुधवारको राशिफल हेर्नुहोस्
राति सुत्नुअघि एक हप्तासम्म नियमित खानुहोस् ल्वाङ, आफै देख्नुहुनेछ नतिजा
जब नेहाले रोहनप्रितलाई पूर्व प्रेमिकासंग सम्बन्ध तोड भनिन्, भयो यस्तो हंगामा
मुख्य पृष्ठ /News/खोकनामा किसान र प्रहरीबीच झडपः प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार, किसान धान रोपेर छोड्ने अडानमा
खोकनामा किसान र प्रहरीबीच झडपः प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार, किसान धान रोपेर छोड्ने अडानमा
काठमाडौँ, २० असार । ललितपुरको खोकनामा किसान र प्रहरीबीच झडप भएको छ । खेत रोपाइँ गर्न गएका ललितपुरस्थित खोकनाका किसान र प्रहरीबीच झडप भएको हो। फाष्ट ट्रयाक पर्ने जमिनमा खोकनाका किसानले खेत रोप्न थालेपछि प्रहरीले अवरोध गर्न खोजेको थियो । सोही क्रममा किसान र प्रहरीबीच झडप भएको हो ।
किसानहरूले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै खनजोत गरी रोपाइँ गरेका थिए । फाष्ट ट्रयाक पर्ने जमिनमा नै स्थानीय किसानहरुले संयुक्त रूपमा खेत रोपाइँका कार्यक्रम गरेपछि शनिबार बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित थियो ।
आक्रोशित किसानहरुको समूहलाई लक्षित गरी प्रहरीले केही सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । प्रहरीले अश्रुग्यास हानेपछि स्थानीय किसानले पनि ढुंगा हानेका थिए । जसका कारण केही व्यक्ति घाइते भएका छन् । यसअघि असार १५ गते खेत रोपाइँमा गएका खोकनाका किसानलाई पनि प्रहरीले अवरोध गरेको थियो। तर किसान भने मुआब्जा नपाएको जग्गामा धान रोपेर नै छाड्ने अडानमा छन् ।
सुस्मिता बिहेमा नाचेको भिडियो भाइरल बिहेको भिडियोमा यस्तो भेटियो सुस्मिताको पुनर्जन्म (हेर्नुहोस भिडियो)
विवाहपछि छोरा ससुरालितिरै, ७८ वर्षको उमेरमा पात बेच्दै आमा ! [सहयोग गर्नेको लहर उर्लियो ]
कोरोना संक्रमित छोरा आइसोलेसनमा, घरमा आमाको मृत्यु
सप्तरीका दुई वडा कार्यालयमा तालाबन्दी